अभ्यास खेलमा पारस र ललितको शानदार प्रदर्शन, होग्स क्लब २४३ रनले पराजित ! – Everest Dainik – News from Nepal
अभ्यास खेलमा पारस र ललितको शानदार प्रदर्शन, होग्स क्लब २४३ रनले पराजित !
काठमाडौं, साउन ६ । इंग्ल्यान्ड भ्रमणमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीले पहिलो अभ्यास खेलमा शानदार प्रदर्शन गर्दै विजयी भएको छ । इंग्ल्याण्डको स्थानीय क्लब ह्याम्पसायर होग्सलाई २४३ रनले पराजित गर्दै नेपाल विजयी भएको हो । ३६३ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको होग्स ३७ ओभरमा ११९ रन बनाउँन मात्रै सक्यो । हग्सलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा नेपालका ललितनारायण राजवंशीले उत्कृष्ट बलिङ गरे । १० ओभर बलिङ गर्दै ४ ओभर मेडन राखेर ३४ रन खर्चदै ५ विकेट लिए।
यस्तै सन्दीप लामिछाने र दीपेन्द्रसिंह एेरीले २ २ विकेट लिए भने करण केसीले १ विकेट हात पारे। होग्सका ह्यारी फिसरले ३३ तथा टिम बाउचरले २२ रन जोडे। यसअघि टसजितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालले कप्तान पारस खड्काको उत्कृष्ट प्रदर्शनको मद्दतमा निर्धारित ५० ओभरमा ३ सय ६२ रनमा अलआउट भएको थियो । पारसले हिजो भएको पहिलो अभ्यास खेलमा १ सय ६१ रन बनाए ।
दीपेन्द्रले ३७ र आरिफले २७ रन बनाए। पारस ३८ औं ओभरमा आउट भएपछि नेपालको रनमा केही अंकुश लागे पनि रोहितले पुनः खुलेर खेले। रोहितले ३४ बलमा ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरी ४४ रन बनाए। दीपेन्द्रले ४६ बल खेल्दै ५ चौका र आरिफले २५ बल खेल्दै ३ चौका प्रहार गरे। करण केसी १८ तथा सन्दीप लामिछाने र ललितसिंह भण्डारी समान १६ रनमा आउट भए। ललित इनिङ्सको अन्तिम बलमा पेभेलियन फर्किए। नटआउट ललितनारायण राजवंशीको खातामा २ रन थियो। स्थानीय टोलीका मिल्स कोभर र जोन पोर्टोलले ३(३ र जेम्स विल्केस ग्रिनले २ विकेट लिएका थिए।
ह्याम्पसायरले ३० वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय टोलीलाई आफ्नो मैदानमा बोलाएर खेलेको हो। नेपालले थप तीन अभ्यास खेल खेलेपछि लर्डसमा एकदिने ट्वान्टी-२० त्रिकोणात्मक शृंखलामा सहभागिता जनाउने छ। त्यसमा मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब र नेदरल्यान्ड्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यसपछि नेपालले एमस्ट्राडममा गएर नेदरल्यान्ड्ससँग वान-डे अन्तर्राष्ट्रिय खेल्नेछ। नेपालले पहिलोपल्ट वान-डे अन्तर्राष्ट्रिय खेल्न लागेको हो।
ट्याग्स: nepali cricket team, Parsa khadka, पारस र ललित